मौरीकाे मह खाँदा कस्ता कस्ता कुरामा फइदा पुग्दछन् त ? यस्ताे महत्त्वपुर्ण जानकारी जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it डण्डिफोर निचार्नुहुँदैन तरपनि निचार्छन्, फुटाउँछन् त्यसरी निचार्नु भनेको छालालाई अत्याचार गर्नु हो । के गर्ने त ? कसरी बच्ने डण्डिफोरबाट ?
Up Next जिम गर्दै हुनुहुन्छ ? जिम गरेर मात्र ज्यान बन्दैन यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनु अति जरुरी छ । आउनुहाेस् जानाै के के हुन त